game. review – Gaming Noodle
[Unicode] ငယျငယျက ဆော့ခဲ့တဲ့ Bomberman ဂိမျးရဲ့ Battle Royale ဗားရှငျး Bombergrounds ထှကျထားတာ မကွာသေးတဲ့အပွငျ ဖုနျးတှေ (Android & iOS) ရော PC (Steam) မှာပါ Free ကစားနိုငျတဲ့ ဂိမျးလေးတဈခုနဲ့ မိတျဆကျပေးပါရစေ။ ငယျငယျက Family ဂိမျးခတျေလောကျတညျးက ဆော့လာခဲ့တဲ့ Bomberman ဂိမျးကို မှတျမိကွလားဗြ? နငျတနျးဒိုးလို့ချေါကွတဲ့ SNES မှာတော့ အကောငျသေးသေးလေးတှနေဲ့ ဗုံးတှထေောငျပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ပွိုငျဆိုငျရတဲ့ ဂိမျးအမြိုးအစားလေးပေါ့။ အခု အဲဒီ Bomberman ဂိမျးဟာ Battle Royale အမြိုးအစားအနနေဲ့ Bombergrounds: Battle Royale ဆိုပွီး ပွနျလညျ ရောကျရှိလာပွနျပါပွီ။ Gameplay Bomberman ကို …
ငယျငယျက ဆော့ခဲ့တဲ့ Bomberman ဂိမျးရဲ့ Battle Royale ဗားရှငျး Bombergrounds Read More »
Noodle’s Mobile Game Review – “Archero”
[ZawGyi] Noodle’s Mobile Game Review – Archero ဒီတစ်ခါ Gaming Noodle ကနေ တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Game Control, သပ်ရပ်လှပတဲ့ Animation ဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ ဆော့ရင်ဆော့သလောက် Depth ရှိတဲ့ Gameplay တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Free-to-play မိုဘိုင်းဂိမ်းကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ အဲဒါကတော့ Archero ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလေးပါပဲ။ ဒီဂိမ်းကို အရင် Flaming Core နဲ့လူသိများတဲ့ Habby စတူဒီယိုက ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ သူ့ဒီဇိုင်းက မိုဘိုင်းပေါ်မှာမြင်နေကြ Nonstop Knight တို့၊ Clash Royale တို့လို ဒီဇိုင်းမျိုးလေးပါပဲ။ ဒီစတိုင်လ်က သပ်ရပ်ပြီး ကြည့်လို့လှသလို မိုဘိုင်းနဲ့လည်း တော်တော်ကိုက်တဲ့ ပုံစံတစ်ခုပါ။ ကစားပုံကရိုးရှင်းပါတယ်။ ကစားသူဟာ …
Noodle’s Mobile Game Review – “Archero” Read More »